फेसनेबल बन्दै तीज
“अहिलेको सारीको नयाँ फेसन के छ ? खै देखाउनुस् त, राम्रो रैछ भने लिनुपर्ला,” कुपण्डोलको न्यू चेली बुटिकमा सारी छान्दै वसुन्धाराकी बन्दना शर्मा भन्छिन्, “वर्षदिनको तीजमा त नयाँ सारी लाउनै प-यो, पुरानो सारी लगाएर त फेसबुकमा फोटो पोष्ट के गर्नु ?”नजिकिँदो तीजसँगै नयाँ फेसनका सारीहरूमा आँखा डुलाउँदै छिन् । उनी त एउटा उदाहरणमात्रै हुन् ।
धेरै छन् पुरानै सारीमा फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्न नचाहनेहरू । अनि अरु थुप्रै नारीहरू छन् नयाँ फेसनका सौखिनहरू । बसुन्धाराकै सुष्मा शर्मालाई नयाँ सारी नफेरी तीज मनाएको जस्तै लाग्दैन । दर खाएर नाचेर मात्रै तीज आएको आभास हुदैन, नयाँ लुगा नकिने सम्म । उनले तीजका लागि नयाँ सारी किन्ने तयारी गरेकी छिन् । एक पटक लगाएको लुगाहरू अर्को पटक दोहो-याएर लगाउनै चाहन्नन् उनी । नयाँ नयाँ फेसन जब बजारमा आउँछ, अनि उनलाई नयाँ फेसनअनुसारका कपडाहरू कहिले किनिहालौं जस्तै लाग्छ ।
उनीसँग दर्जनौ साडीहरू त छन् तर के गर्नु नयाँ फेसन अनुसारका साडी लगाएर साथीसङ्गी छमछम तीजमा नाच्दा शर्माका आँखा पनि नयाँ चीजमा नजाने त कुरै भएन । “नयाँ फेसनका कपडाहरू किन्न मन लाग्छ,” उनी भन्छिन्, “पुरानै डिजाईनका कपडाहरू लगायो भने त तीज आएको जस्तै लाग्दैन ।” भैंसीपाटीकी कल्पना थापा पनि तीजका लागि नयाँ लेहँगा किन्ने सोचमा बुटिकहरू धाइरहेकी छिन् । “राम्रो गुणस्तर चाहिन्छ, अनि नयाँ फेसन पनि, पैसामा कम्प्रोमाईज गर्न मन लाग्दैन,” उनी भन्छिन्, “फेसन राम्रो भए पो बाहिरी आकर्षण बढ्छ, मान्छे राम्रो फेसनलै नै देखाउँछ ।”
आँखा गयो नयाँ चीजैमा.............
कल्पना भण्डारीले गाएको यो तीजको गीतजस्तै हुन पनि नयाँ नयाँ फेसनमा आँखा डुलिरहेको छ अधिकांश नारीहरूको । तीज नजिकिसक्यो । हाम्रा घर आँगनीहरूमा तीजका गीतहरू घन्किरहेका छन् । रमझम छ वरपर । चेलिबेटीहरू माईतीघर आउने क्रमहरू बढिरहेको छ । माहोल उमंग र रमणीय बन्दै गईरहेको छ । कयौंलाई दर खान जान पनि ध्याई नभ्याई हुन थालिसकेको छ । अनि तीजका लागि कपडा किन्नेहरूको भीड पनि उस्तै बाक्लिएको छ । तीजको तयारीमा व्यस्त छन् कति नारीहरू । कतिले अझै आँखाहरू नयाँ नयाँ फेसनहरूमा डुलाईरहेका छन् । हरेक वर्षका तीजमा हरेक नारीका चाहना यो हुन्छ की नयाँ नयाँ फेसनका लुगा लगाएर चिटिक्क पर्ने । नारीका यी चाहनाहरू पूरा गर्न भ्याई नभ्याई भएको फेसन डिजाइनरहरूलाई पनि । बुटिकहरूमा नयाँ फेसनका लुगाहरू किन्नेहरूको भिड बाक्लिएको छ । फेसन डिजाइनर अनु चौधरी पनि महिलाहरूको फेसनमा बढ्दै गइरहेको शोखका कारण समयअनुसारको डिजाइनहरू सिक्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछिन् । “कति जना इन्टरनेटहरूबाट डिजाइन लिएर आउनुहुन्छ, गाह्रो त हुन्छ नि तर के गर्नु जसरी पनि उहाँहरूको चाहना हामीले पूरा गर्न सक्नैपर्छ,” उनी भन्छिन्, “अझ यो तीजहरूमा त धेरै थरीका डिजाईनहरू गर्न जान्नैपर्ने हुन्छ ।”अर्की फेसन डिजाईनर मीना ढकालको पनि अनुभव फरक छैन । “समय अनुसारको डिजाईन गर्न, अरुको भन्दा फरक डिजाईन गर्न सक्यो भने मात्रै ग्राहक आकर्षण गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छिन् । पछिल्लो समय फेसनकै शोख बढ्दै गएसँगै यसको बुटिकको व्यवसायहरू पनि बढिरहेको छ । बुटिकमा नै भविष्य देखेर अमेरिकाको १० वर्षे बसाई छोडेर स्वदेश फर्किएकी छिन्, युवा उद्यमी अनुष्का भट्ट । उनले कुपण्डोलस्थित न्यु चेली बुटिक खोलेर व्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेकी छिन् ।
फेसनमा सोख बढिरहेको छ
आमा छोरी बुटिक
आजभोलि मानिसहरूमा फेसनमा बढी शोख बढ्दै पनि गइरहेको छ । फेसनका लागि पैसा खर्च गर्न डराउँदैनन् । किनकी फेसनले मान्छेको बाहिरी सौन्दर्यता बढाउँछ । झन् तीजमा महिलाहरू धेरै फेसन सौखिन नै हुन्छन् । तीज नजिकिँदै गर्दा झन् बढी महिलाहरू नयाँ नयाँ फेसनका कपडाहरू किन्नेहरूको भीड बढिररहेको छ । बुटिकमा आफूले चाहेअनुसारको डिजाइनमा कपडाहरू सिलाउने पाइन्छ । शरीरमा सुहाउँदो कपडा लगाउनुपर्छ । आफ्नै डिजाईनका कपडाहरू लगाउँदा डिजाइन जुध्दैन । नत्र आफूले नै लगाएको कपडाहरू बाहिर अरुले लगाएको देख्दा त्यो कपडा पछि लगाउन मन नलाग्ने नि हुन्छ । यसकारण नयाँ नयाँ फेसन अनुसार डिजाईनमा कपडा लगाउन सबैलाई चाहना हुन्छ । यसकारण बाहिरभन्दा बुटिकमा आकर्षण बढेको हो ।
मोटी हुनुहुन्छ भने
♥ डार्क, कालो, निलो रंकको कपडा लगाउँदा दुब्लो देखाउँछ ।
♥ गलाहरू भि आकारबाट खोलिएको डिजाईन लगाउँदा हल्का दुब्लो देखाउँछ ।
♥ सिफनको कपडाले पनि यहाँलाई दुब्लो देखाउँछ ।
दुब्ली हुनुहुन्छ भने
♥ फिटिङ कपडाहरू राम्रो देखिन्छ ।
♥ गलाहरू हल्का बढी खोलेर सिलाउनुभयो भने राम्रो देखिन्छ ।
कालो छाला छ भने
♥ कालो भए पनि अनुहारको बनावट हेरेर ड्रसप गर्दा राम्रो देखिन्छ । तर उज्यालो रंगको कपडा बढी सुहाउँछ ।
गोरो छाला छ भने
♥ सामान्यतया गोरो छालाहरूको लागि सबै कलरहरू राम्रो देखिन्छ । तर गुलावी, रातो, सेतोहरूले अझै राम्रो देखिन्छ ।
फेसन जीवनशैली हो
युवा उद्यमी तथा सञ्चालक न्यु चेली बुटिक, कुपण्डोल
तीजमा फेसनको महत्व कत्तिको बढेको छ ?
अहिले त तीज नजिकिँदै गर्दा नेपाली दिदी बहिनीहरूको फेसनमा मोह बढिरहेको देखिन्छ । तीजमा यसको महत्व नबढ्ने कुरा नै भएन । यो समयमा त व्यवसाय बढेको छ । ग्राहकहरूको भिड पनि बाक्लो छ ।
फेसनप्रति मानिसहरूको मोह बढ्दै गएको हो ?
हो, फेसन कपडामात्रै होइन । फेसन जीवनशैली पनि हो । फेसनले मानिसको व्यक्तित्व झल्काउँछ । फेसन हाम्रो पहिचान पनि हो । यसले हाम्रो समाज राष्ट्रलाई चिनाउँछ । फेसन एउटा कला र जिउने शैली पनि हो । सुरुमा त बाहिरी सुन्दरताले नै त हो मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्ने । जब मान्छेको ड्रेसप राम्रो हुन्छ तब मानिसहरूको व्यक्तित्व आकर्षक देखिन्छ ।
कस्तो डिजाइनका कपडामा ग्राहकको रुची छ ?
पहिला पहिला त साडीमात्रै लगाउने हो भन्ने प्रचलन बढि थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । विवाहित महिलाहरूले पनि आजभोली लेहँगा, गाउुन, कुर्ता सुरवाल रुचाउन थाल्नुभएको छ । टिनेजहरूको रुची त गाउन र लेहँगामा नै छ । ४५ वर्ष नाघेका महिलाहरूले चाही साडी लगाउनुहुन्छ । पहिलाको तुलनामा महिलाहरूमा साडीको चाहना कम भएको छ । लगाउन पनि समय लाग्ने भएकाले पनि हुन सक्छ ।
नेपाल बाहिर बुटिकका कपडाहरूको माग कस्तो छ ?
विदेशमा भने एकदमै धेरै माग आउँछ । उहाँहरू अझै पनि नेपाली पोसाकलाई झन् बढी महत्व दिनुहुन्छ । तीजको समयमा मात्रै होइन, अरुबेला पनि अनलाइनबाट विश्वभर छरिएर रहेको महिला दिदी बहिनीहरूले बुटिकका सामानहरू माग गर्नुहुन्छ । हामी अनलाईनमार्फत् उहाँहरूलाई सामान उपलब्ध गराउँछौ ।
बुटिकमा व्यवसायमा भविष्य छ र ?
गर्न सक्यो भने स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ । म अमेरिका आउने–जाने त गर्छु । तर बस्न त स्वदेशमा नै बस्छु । यसको सम्भावनाहरू राम्रो छ । यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि व्यवसाय गर्ने योजना बनाएकी छु । किनकी विदेशमा भन्नेवित्तिकै साडी, गाउन, चोली, लेहँगा, ब्लाउज तथा अन्य पार्टी ड्रेसहरू किन्न पाइँदैन । नेपालबाट अर्डर गर्नुपर्छ । अब उहाँहरूको सुविधाका लागि पनि अमेरिकामा न्यू बुटिक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु ।
विदेश जाने बहानामा कैयौं चेलीहरू बेचिनु भएको छ । उहाँहरूलाई यस्तै सिपहरू सिक्ने अवसर मिल्यो भने नेपालमा नै केही गर्न सक्नुहुन्छ । स्वदेशमा नै भविष्य छ भन्न चाहन्छु । अहिले ५० जना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दिलाइसकेकी छु ।
अन्य बुटिकमा भन्दा न्यु चेली बुटिकमा फरकपन के छ ?
तीजमा स्पेसल डिस्काउन्ट १० प्रतिशत गरेका छौँ । यसमा एकपटक आउने ग्राहकहरू एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी नयाँ र फरक तरिकाले डिजाईन गर्छौ । नयाँपन दिन्छौ । यसकारण सबैजनाले मन पराइदिनुभएको छ । न्यू चेली बुटिकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फेसन बनाउँछ । हाम्रो ब्राण्डले समाजमा एउटा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको छ । यसमा गर्व लाग्छ । संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अर्डर गर्न सकिन्छ । हामी मौसम अनुसारका कपडाहरू उत्पादन गर्छौ ।